Waxaa lagu soo diray warqad lagugu yeeraayo in laga qaado shay-baarka ku salaysan unugyada saxaaxyada - 1177
Du har fått en inbjudan till att lämna ett gynekologiskt cellprov - somaliska
Dhammaan dumarka dalka Iswiidan ku nool oo da'dooda u dhaxayso 23 – 60 sano, waxaa la siiyaa fursad looga qaado shay-baarka ku salaysan unugyada saxaaxyada. Haddii haweeneyda ay fursada shay-baarka ku salaysan unugyada saxaaxyada ka faa'iidaysato, waxay ka badbaadi kartaa kaansarka dhuunta ilmo-galenka ku dhaca. Cudurro tiro badan ayaa hab xasilan u kora, taasoo sababayso in dumarka xannuunka ku dhacay ay goor dambe dareemaan calaamadaha jirrada. Kaansarka dhuunta ilmo-galenka ku dhaca cudurradaas ayuu kamid yahay. Haseyeeshe, haddii laga faa'iidaysto baaritaan fudud, oo qaadanaayo dhowr daqiiqado, waxaa lagu shaac-bixin karaa haddii ay jiraan is-bedellada unugyada intii kaansarka usan soo ifbixin. Is-bedellada noocaas ah waxaa looga hortegi karaa qallin fudud.
50 sannadood ee ugu dambeeyeen waxaa suurtagal noqotay, in boqolkiiba konton hoos loo dhigo tirada dumarka dalka Iswiidan ku nool oo kaansarka dhuunta ilmo-galenka ku dhici jiray. Hoos u dhaca waxaa suurtageliyay dumarkii oo hab joogto ah, ka faa'iidaysan jiray shay-baarka ku salaysan unugyada saxaaxyada.
Warqadii yeeritaanka ee af-iswiidishka ku qornayd, waxaa ku qoran waaxda baaritaanka, taariikhda iyo saacadda aad baaritaanka samayn doonto. Waa in aad la kaalisa warqadda aqoonsiga oo aad ku caddaynayso qofka tahay. Xilliga baaritaanka waxaa ku daryeeli doono qof ummuliso ah oo gaar ahaan loo soo tababaray. Shay-baarka waxaa laga qaadi doonaa siilka wax xannuun ah ma laha. Qof wehel ah waad soo kaxaysan kartaa.